उलार हातमा लिएर पढ्न बस्नु पहिले साच्चिकै मलाई के लागेको थियो भने सामाजिक यथार्थको अनेकन अज्ञात कहानी मध्य एउटा कहानी ज्ञात हुनेछ । सुनेबुझेको कथाहरुको मनोसूचिमा एउटा कथा अंकित हुनेछ। एउटा क्षेत्र को देखिने गरि र बाकी क्षेत्रको झल्किने गरि जीवनहरुको पोट्रेट देख्नेछु । केही समय मै म मान्छेले भोग्नुपर्ने कैयन नियती मध्य प्रतिनिधि नियति बारे पढिसक्नेछु । एउटा मुटु समात्ने सामाजिक दुःख पढ्नेछु ।
उपन्यास भन्दा पहिले लेखक स्वयम ले लेखेको ‘प्रेमललवा के तिमीले उलार पढ्यौ??’ पढें । पहिलो वाक्य थियो– उलार लेखेको बीस बर्ष भएछ । यो लघुउपन्यास म भन्दा दुई साल ले कान्छो रहेछ । लेखक ले लेखेझैँ यो पुस्तक सितै हुर्किएको पुस्ताको एउटा प्रतिनिधि पाठक रहेछु म । अर्काे संयोग–उपन्यास मैले सहि समय मा किनेछु । उपन्यास को पात्र ले काठमाडौ आउँदा जाडो भोगेको छ । लेखक को दिमाग मा प्लट पनि जाडो याम मै फुरेको रहेछ । र मैले पनि जाडो समय मै पढे ।
उपन्यास मा जब प्रेमललवाको घोडा मर्छ , तब म केही क्षण अगाडि पढ्न नसक्ने हुन्छु। तीखो पीडाबोध ले अठ्याउँछ । अनि आफ्नो मनको ‘उलार’ लाई बहकाउन फेसबुक खोल्छ । अर्काे संयोग – टाइमलाइन मा लेखकले शेयर गरेको लिन्क देखा पर्छ। खोल्छु । अन्नपूर्ण शनिबार मा श्यामल ले गरेको उलार चर्चा स्क्रीन मा देखिन्छ । पढिभ्याउछु । आरिस जस्तो लागेर आउँछ। श्यामल ले मैले लेखुलाँ जस्तो लागेको सबै कुरा लेख्दी भ्याएछन । पुस्तक मै उनको भूमिका पनि छ । त्यो उपन्यास पढिसकेर पढ्ने सोचेको थें।
पढिसकें । केही घन्टा सम्म गतिलो डकुमेन्ट्री हेरेको जस्तो मनोवस्था मा रहिरहें । मानौँ कि म आफै प्रेमललवा हुँ।राजेन्द्रराज शर्मा लाई मैले नै भोट मागेको हुँ। हालेको हुँ। उसले चुनाव हार्दा मेरो निम्नवर्गीय आशा,अपेक्षा ले पनि हारेको हा े। देहब्यपार गर्ने बदिनी द्रौपदी लाई म पनि प्यार गर्छु । उ पैसाको लागि हरेक रात शरीर बेच्छे । उसको बिरामी आमा र कान नसुन्ने बाउ छोरी सित सेक्स गर्ने ग्राहक खोजिबस्छन । बाउ थाहा पाउन नसकिने गरि उसको छोरी जन्मेकी छ । तहिपनी म द्रौपदी लाई स्वास्नी बनाउने सपना सजाइबस्छ ु। म पनि आफैले बिस्वास गरेको प्रीय नेता राजिन्दर बाबू बाट ठगिएर जग्गा बेच्छु सस्तो मोल मा । घोडा किन्छु। दिन भर लखतरान हुने गरि टाँगा चलाउछु। एक–दुई गिलास रक्सी पिउछु । द्रौपदी लाई पैसा दिएर सम्भोग गर्छु र झुप्रो मा रात बिताउछु। कुनै दिन मेरो टाँगा घिच्चाइहिड्ने घोडा ‘बसन्ती’मर्छे । म रुन्छु । चिच्याउछु । राजिन्दर बापु ले चुरोट को खोल मा लेखिदिएको सिफारिस अनुसार घोडा किन्न पुग्ने दस–पन्ध्र हजार पाउन मन्त्री भेट्न नेपालगंजबाट काठमाडौ आउछु । कथाकार बाट ठगिन्छु । शान्तिराजा जस्तो मन्त्री को उस्तै ब्यवहार ब्यहोर्छु। चारपाँच दिन सम्मन पुल्चोक ,बालुवाटार र सिंहदरवार धाउदा पनि केही हुन नसके पछि चिसो , भोक र काठमाडौ को तिरस्कार सहेर फर्किन्छु । द्रौपदी ले राजधानी छिर्न खर्च नहुदाँ कान को गहना फुकालेर प्यार मलाई पनि दर्शाछे। हरेक रात अनेक पुरुष सित नांगिए पनि उ म सित लजौछे । मेरो पनि सानो कटेरो पानी ले बगाउछ। टाँगा चोरी हुन्छ। म पनि ९० हजार लेखिएको कागज मा ल्याप्चे लगाएर तीस हजार मा आफ्नो बचेको जग्गा राजिन्दरबाबू लाई सुम्पिन्छु । र नयाँ घोडा , नयाँ टाँगा किन्ने र दरौपती लाई बिहे गर्ने प्रतिज्ञा गरिबसेको छु।
पुराको पूरा यसरी प्रेमललवा को चरित्र बाट केही क्षण आफुलाइ आफुभित्रै बिस्थापित गराउन पुगेछु जसरी नाटकका कलाकार हरु लाई चरित्र को ह्यांग ओभर ले झट्टै छोड्दैन। यसरी केही घन्टा म अर्कै ब्यक्ती बन्न पुग्छु। मलाई यस्तो अर्कै चरित्रलोक मा पु¥याएर ‘पहाडी हटारु, ठग बनियाँ, उद्दण्ड मण्डले, शरीर बेच्ने बदिनी’ हरू बाट चिनाइएको नेपालगंज को नयाँ इमेज बन्ने गरि ब्रेनवाश गर्न सक्ने लेखक नयनराज सलाम । म पहाड मा हुर्केको युवा लाई तराइ ,त्यहाँ को जीवन , संघर्ष , समसामयिक राजनैतिक प्रवृत्ति र यथार्थता बारे छोटकरी मा शब्दचित्र देखाइदिनु भो। धन्यवाद ।
पढेपछी पढें भनेर जनाउन केही लेखुलाँ भन्ने सोच थियो। तर अन्नपूर्ण र पुस्तक कै श्यामल को वजनदार लेख र भूमिका ले मलाई लेख्नै नसक्ने पारिदियो । कोहि किन लेखोस? दिमाग मा केही बिचारहरु पैदा भएर लेखूँलेखूं लागेको तर कसैले नलेखेको भए न लेख्छ । लेखिन्छ । यो उपन्यास पठन सितै थप एउटा कुरा मा निश्चिन्त भएं कि श्यामल को जस्तै बोध हुदो रहेछ मलाई पनि । श्यामल ले मेरो उमेर मा पढेको भए वा मैले अहिले भोगिरहेको सामाजिक र राजनैतिक परिस्थितिमा पढेको भए कसरी बुझ्थें होलान् ?
यतिखेर तराइ अधिकार को लडाइँ मा छ – भनिएको छ । तराइ को जनता ले खोजेको अधिकार –राज्यबाट सम्मानजनक नेपालीको व्यवहार होस् –भन्ने मात्र पनि होइन । गुजरा चलाउन सक्ने त्यस्तो आर्थिक वातावरण पनि हो–जहाँ दिनभर श्रम गरेपछी ढुक्कको साथ मीठो खाना मिलोस। जहाँ बिमार पर्दा उपचार गर्न सकियोस् । खुसीसाथ प्रेम गर्न पाइयोस, संभोग गर्न पाइयोस । सन्तान लाई शिक्षा दिन सकियोस । तेस्तो व्यवस्था होस जहाँ आवश्यक पर्दा बोलिदिने राजनैतिक सारथि होस । राजिन्दरबाबू , शिलाबाबु र शान्तिराजा हरुको घिनलाग्दो राजनितीको सिकार हुन नपरास । असलमै प्रतिनिधि होस । श्रम मा रमाउने प्रेमललवा हरु लाई व्यवस्था सित खासै लिनुदिनु छैन। कुनै वाद र दर्शन को मतलब छैन। प्रेमललवाको चाहना त अझै पनि स्वतन्त्र पुर्वक टाँगा चलाउन पाइयोस, कुनै जूलूसले, राजनैतिक स्वार्थ या खिचातानी ले गरिखाने जिन्दगी को‘टाँगा’ उलार नहोस भन्ने नै हुदो हो।
पढ्ने र बुझ्ने अबसर नपाएका , नदिइएका र गोरु झै जोतिएर पनि खानलाउनै नपाएका प्रेमललवा, दरौपति, सावित्री, ननकउ र कलुवा ले खोज्ने कुरा के हो भन्ने विश्लेषण गर्न आग्रह रहित स्वतन्त्र र सही बिचार साहित्य ले दिनुपर्छ । आख्यान ले त झनै दिनुपर्छ । बीस वर्ष अगाडि नै यस्तो बिचार लाई अवचेतन मा बोकेर सरल तरिकाले , सानो पुस्तकाकार मै नेपालगंज को समूल शब्दचित्र कोर्न सक्ने नयनराज पाण्डे यु आर सिम्प्ली द बेस्ट।
मनहरि तिमिल्सिनाको पुस्तक ‘कम्युनिस्ट स्कुल’ को लोकार्पण
११ माघ, काठमाडौँ । कम्युनिष्ट विचार र आचारण कमजोर भएको…
२६ पुस, काठमाडौँ । पर्यटन उद्यमी एवं नेपाल–फ्रान्स उद्योग वाणिज्य…